စောအောင်၊ ဗိုလ် (ရဲဘော်သုံးကျိပ်) - ဝီကီပီးဒီးယား
ဗိုလ်စောအောင် (၁၉၁၄ - ၁၉၄၂) သည် ရဲဘော်သုံးကျိပ်ဝင် တစ်ဦးဖြစ်သည်။ ရဲဘော်သုံးကျိပ်ထဲတွင် ပထမဆုံး ကျဆုံး ခဲ့သူလည်း ဖြစ်သည်။ အမည်ရင်းမှာ ကိုငွေ ဖြစ်သည်။ ရှမ်းလူမျိုး ဖြစ်သည်။ တို့ဗမာအစည်းအရုံး သို့ ဝင်သောအခါ သခင်ငွေ ဖြစ်လာခဲ့သည်။ ဂျပန်အမည်မှာ ကတ်ဆုရာ ဖြစ်သည်။ ထိုင်းနိုင်ငံ ဗန်ကောက်မြို့တွင် ရဲဘော်သုံးကျိပ်ဝင်များ ဗိုလ်အမည် ခံယူရာတွင် ဗိုလ်စောအောင် ဖြစ်လာခဲ့သည်။
မြန်မာနိုင်ငံကို အင်္ဂလိပ် လက်အောက်မှ လွတ်မြောက်ရန် မြန်မာအမျိုးသားတိုင်း၏ မိဘ၊ညီအကို ဆွေမျိုးသားချင်းများသာမက တနိုင်ငံလုံး က ကြိုးစားခဲ့ကြရာတွင် ပါဝင်ခဲ့သည်။ သမိုင်းဝင် ရဲဘော်သုံးကျိပ်တွင် ညီအကိုတော်သူ ၂ ဦးပါဝင်ခဲ့ရာ အကိုမှာ ဗိုလ်စောအောင် ဖြစ်ပြီး ညီဖြစ်သူမှာ ဗိုလ်စောနောင် ဖြစ်သည်။
၁၉၁၄ ခုနှစ် ဧပြီ ၂၈
၁၉၄၂ ခုနှစ် ဖေဖော်ဝါရီ ၂၆
ဗိုလ်စောအောင် ကို ၂၈ ဧပြီ ၁၉၁၄ ခုနှစ်တွင် ကမာရွတ် ရှမ်းစုရွာ၌ ဦးဘိုးညွန့်၊ ဒေါ်ရွှေမှတ် တို့မှ ဖွားမြင်သည်။ ရှမ်းလူမျိုး ဗုဒ္ဓဘာသာဝင် ဖြစ်သည်။ အမည်ရင်းမှာ ကိုငွေ ဖြစ်သည်။ ရန်ကုန်မြို့ ကမာရွတ်တွင် အင်္ဂလိပ် မြန်မာ သတ္တမတန်း အထိ ပညာ သင်ကြားခဲ့သည်။ ညီဖြစ်သူမှာ ရဲဘော်သုံးကျိပ်ဝင် ဗိုလ်စောနောင် ဖြစ်သည်။
ညီဖြစ်သူ ဗိုလ်စောနောင် (ရဲဘော်သုံးကျိပ်)
၁၉၃၄ ခုနှစ်တွင် တို့ဗမာအစည်းအရုံး သို့ ဝင်ရောက်၍ နိုင်ငံရေး ဆောင်ရွက်ခဲ့သည်။ ၁၉၃၈ ခုနှစ် တို့ဗမာအစည်းအရုံး နှစ်ခြမ်း ကွဲသွားသော အခါ သခင်ထွန်းအုပ်၊ သခင်ဗစိန် တို့ဗမာအစည်းအရုံး တွင် ပါဝင်ခဲ့သည်။ ဂျပန်နိုင်ငံသို့ စစ်ပညာ သင်ကြားရန် ရွေးချယ် စေလွှတ်ခြင်း ခံရသည်။
သခင်ငွေသည် တိုင်းပြည်နှင့် လူမျိုး လွတ်လပ်ရေးအတွက် မိခင်ကြီးနှင့် တကွ ဇနီးနှင့်သား သံယောဇဉ်များအား ဖြတ်တောက်၍ ၈ ဇူလိုင် ၁၉၄၁ ခုနှစ်တွင် မြန်မာမျိုးချစ်လူငယ် စတုတ္ထ အသုတ်နှင့်အတူ ကိုရီယူမာရူး သင်္ဘောဖြင့် ရန်ကုန်မြို့မှ ထွက်ခွာခဲ့ရာ ၂၂ ဇူလိုင် ၁၉၄၁ ခုနှစ်တွင် ရှန်ဟိုင်းသို့ရောက်ရှိခဲ့သည်။ ၂၄ ဇူလိုင် ၁၉၄၁ ခုနှစ်တွင် ရှန်ဟိုင်းမှ လေယာဉ်ပျံဖြင့် ဂျပန်နိုင်ငံ ကျူရှူးကျွန်း နာဂါစကီးမြို့ အနီးရှိ ရေတပ်စခန်းသို့ ရောက်ရှိခဲ့သည်။ ထိုမှတဆင့် ဟာကိုနီ တောင်ပေါ်စခန်းမြို့သို့ သွားရောက်ကာ အပန်းဖြေခဲ့ကြသည်။ ၈ ဩဂုတ် ၁၉၄၁ ခုနှစ်တွင် တိုကျိုမှ ဟိုင်နန်ကျွန်း သို့ လေယာဉ်ပျံဖြင့် သွားရောက်ရာ ၁၁ ဩဂုတ် ၁၉၄၁ ခုနှစ်တွင် ရောက်ရှိခဲ့သည်။ ဟိုင်နန်ကျွန်းနှင့် တိုင်ဝမ်ကျွန်းတွင် စစ်ပညာများ သင်ကြားခဲ့သည်။
ဗမာ့လွတ်လပ်ရေးတပ်မတော် (ဘီအိုင်အေ) စစ်ဌာနချုပ်နှင့် မော်လမြိုင်စစ်ကြောင်းဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံတွင်း ချီတက်ကာ ဗြိတိသျှတပ်များကို ရွပ်ရွပ်ချွံချွံ တိုက်ခိုက်ခဲ့သည်။ ဗိုလ်စောအောင်သည် ဗြိတိသျှတပ်များ စခန်းချထားသော ရွှေကျင်မြို့ကို ချီတက်တိုက်ခိုက် သိမ်းပိုက်စဉ် ကျဆုံးခဲ့သည်။
ရွှေကျင်မြို့သိမ်း တိုက်ပွဲဆင်နွှဲစဉ် ၂၆ ဖေဖော်ဝါရီ ၁၉၄၂ ခုနှစ် နေ့လယ် ၁၁ နာရီတွင် ကျဆုံးခဲ့သည်။ ဗမာ့လွတ်လပ်ရေးတပ်မတော် စစ်ဌာနချုပ်နှင့် မော်လမြိုင် စစ်ကြောင်းဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံတွင်း ချီတက်ကာ နယ်ချဲ့ဗြိတိသျှတပ်များကို တိုက်ခိုက်ရာ၌ စစ်မြေပြင်တွင် အာဇာနည် သူရဲကောင်း ပီသစွာ ပထမဆုံး ကျဆုံးသွားသော ရဲဘော်သုံးကျိပ်ဝင် ဖြစ်သည်။
↑ Maung M. (1959) War and Japanese Occupation. In: Burma’s Constitution. Springer, Dordrecht
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=စောအောင်၊_ဗိုလ်_(ရဲဘော်သုံးကျိပ်)&oldid=700321" မှ ရယူရန်